XAQIIQ: Tatikada 3-4-3 Oo Horyaalka Premier Leaque-ga Ku Sii Xoogaysanaysa Iyo Arsenal Oo Noqotay Kooxdii 17 Aad Ee Xili Ciyaareedkan Garoonka La Soo Gashay Shaxdan. - Laacib.net
XAQIIQ: Tatikada 3-4-3 Oo Horyaalka Premier Leaque-ga Ku Sii Xoogaysanaysa Iyo Arsenal Oo Noqotay Kooxdii 17 Aad Ee Xili Ciyaareedkan Garoonka La Soo Gashay Shaxdan.
Waxaa horyaalka Premier Leaque-ga si layaableh ugu sii xoogaysanaysa shaxda 3-4-3 oo ah saddex difaac ah, afar dhex ah iyo saddex weerar ah oo waliba laba ka mid ah afarta khadka dhexe ay isku qabanayaan difaacasho iyo weerar dhisid. Shaxdan ayaa ahayd tatikadii uu Antonio Conte ku badbaadiyay Chelsea markii ay laba guuldaro oo waa wayn kala kulantay kooxaha Liverpool iyo Arsenal ee horaantii xili ciyaareedkan.
Laakiin inkasta oo ay Chelsea ahayd kooxda shaxdan inta ugu badan soo isticmaalaysay haddana waxaa jiray kooxo badan oo ku soo ciyaaray shaxda 3-4-3 waxaana ugu danbaysay Arsenal oo kulankii Middlesbrough uu Arsene Wenger shaxdan tijaabiyay muddo 20 sano ka badan oo uu Gunners maamulayay. Waxayna Arsenal noqotay kooxdii 17 aad ee isticmaashay shaxdan.
Waxaa jira qaabab tiro badan oo ay tababarayaashu u safaan kooxahooda balse waxay u muuqataa in shaxda 3-4-3 ay noqonayso mid si wayn u soo koraysa. Koobkii aduunka ee 2014 kii macalinkii xulka qaranka Netherlands ee Louis Van Gaal ayaa wacdaro ku dhigay in uu saddex difaac ah ku soo bilaabayay shaxdiisa wuxuuna isticmaaliyay 3-1-4-2 ama 3-4-1-2, waxanaa markasta shaxdiisa sal dhig u ahaa saddex difaac ah.
Habeenadii isniintii in Arsene Wenger uu shaxda saddexda difaac ah isticmaalay ayaa ka dhigtay kulankii 112 aad ee kooxaha Premier Leaque-gu ay xili ciyaareedkan garoonka ku soo galaan shax saddex difaac dhexe ku soo wada bilawdeen balse waxaa jiray kala duwanaasho mararka qaar ay kooxaha qaar shan difaac ah ku soo galeen. Ka hor October 1,2016 waxay kooxaha PL shaxdan isticmaaleen 10 kulan oo kaliya halka kadib October 1,2016 ilaa isniintii ay isticmaaleen 102 jeer.
Saddex kooxood oo kaliya ayaan xili ciyaareedkan isticmaalin shax saddex difaac ahi ku soo bilawdeen waxayna kala yihiin Swansea City, Southampton iyo West Brom laakiin 17 ka kooxood ee kale ayaa ugu yaraan hal kulan ama wax ka badan garoonka la soo galay shax ay saddex difaac dhexe ku soo bilawdeen.
Laakiin Chelsea ayaa hogaaminaysa kooxda ugu isticmaalka badan shaxda 3-4-3 oo 26 kulan uu Conte la soo shirtagay shaxdan,waxaana ku soo xigta kooxda Watfrod oo 17 kulan tatikadan ku soo ciyaartay. Kooxaha Hull City, West Ham, Tottenham iyo Everton ayaana ku soo xiga sida ay u kala horeeyaan.